XIAOMI MI 8 SE: IS THIS THE NEW FLAGSHIP KILLER? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone XIAOMI MI 8 SE: IS THIS THE NEW FLAGSHIP KILLER?
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ဟာ Mi8 စမတ်ဖုန်းနဲ့ အတူအားလုံးကို အံ့အားသင့်စေမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းကတော့ Mi8 ရဲ့ တန်ဖိုးနည်းမိုဒယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ MI 8 SE ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဖုန်းဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 710 SoC ကိုပထမဆုံးသုံးထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းသုံးသပ်သူ အများစုကတော့ MI 8 SE ကို FLAGSHIP KILLER ဖုန်းလို့သတ်မှတ်နေကြတယ်။ တကယ်ရော MI 8 SE ဟာ FLAGSHIP KILLER ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို သူ့မှာပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင် ….
MI 8 SE မှာတော့ Mi 8 ရဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီ သစ်လွင်တောက်ပနေတဲ့ Notch ပုံစံထိပ်ဘက်လေးနဲ့အတူ Full-View အတွေ့ အကြုံသစ်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကို ကာကွယ်နိုင်စေဖို့အတွက်ကတော့ စမတ်ဖုန်း၂မျိုးလုံးမှာ Corning Gorilla Glass ကိုသုံးထားပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကတော့ ဒေါ်လာ၃၀၀ ဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာ အမိုက်စားပါ။
MI 8 SE မှာတော့ 5.88 လက်မနဲ့Super AMOLED ကိုသုံးထားပြီး 1080 x 2244 pixels( 18.7:9) နဲ့ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ဟာ 81.3% အထိကိုကျယ်ပြန့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့မျက်နှာပြင်ပိုင်းမှာတော့ HDR10 display နဲ့ DCI-P3 ကိုသုံးထားတာကြောင့် အရောင်ဖော်ပြမှုပိုင်းမှာ အတိကျဆုံးပြသပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
MI 8 SE ကတော့ Snapdragon 710 ကိုပထမဆုံးသုံးလာတဲ့ စမတ်ဖုန်းပါ။ Snapdragon 710 မှာတော့ Octa-core (8×2.2 GHz Kryo 360) ကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ AI လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းမှတော့ Snapdragon 845 မှာပါတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ တူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။ RAM ပိုင်းမှာတော့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေရှိနေပြီ6းGB RAM အလုံးကိုကိုင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Mi 8 SE မှာတော့ AI dual ကင်မရာနဲ့ဖြစ်ပြီး တစ်ခုမှာ 12-megapixel ဆင်ဆာနဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ 5-megapixel ဆင်ဆာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအနေနဲ့ f/1.9 aperture, Bokeh mode, Portrait mode, monochrome temp flash, HDR adjustment, panorama mode, burst mode, facial recognition, dimming technology, EIS တို့ပါဝင်ပါတယ်။ AI ကင်မရာရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက business card recognition, intelligent translation နဲ့ intelligent exchange rate တို့ကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အရှေ့ဘက် Selfie ကင်မရာကတော့ 20-megapixel ဖြစ်ပြီး AI background bokeh, smart beauty features အတွက်အရှေ့ဘက်မှာ soft light, automatic HDR, 4K video ရိုက်ကူးနိုင်မှုနဲ့ slow motion တွေရရှိနိုင်စွမ်းပါ။ လက်ရှိမြင်တွေရတဲ့ ပုံစံကတော့ MI 8 SE မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်က ပိုကောင်းနေသလို့ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူ့မှာ AI ထောက်ပံ့ချက်ကို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ Snapdragon 710 နဲ့ Dual-pixel နည်းပညာပေါင်းစပ်လိုက်ရင် အတော်ကြီးကောင်းတဲ့ ပုံတွေ ထွက်ရှိလာမှာပါ။
MI 8 SE မှာတော့ Android 8.1 Oreo နဲ့ MIUI 10 ကိုတပါတည်း သုံးနိုင်နေပါပြီ။ ဒါဟာလည်း အားသာချက်တစ်ခုပါ။ ဘက်ထရီကိုတော့ 3120 mAh နဲ့ Qualcomm Quick Charge 3.0 ပဲသုံးထားပါသေးတယ်။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းမှာတော့ Mi 8 series ဖုန်းဖြစ်နေတာကြောင့် dual nano-SIM ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး ကတ်၂ခုလုံးဟာ VoLTE ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ frequency bands တွေကတော့:
FDD-LTE B1/3/5/7/8 တို့ဖြစ်ပြီး အခြားချိတ်ဆက်မှုတွေအနေနဲ့ 802.11a/b/g/n/ac WiFi, WiFi Direct, 2×2 MIMO Technology, MU-MIMO, WiFi Display နဲ့ Bluetooth 5.0 တို့ကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက တရုတျစမတျဖုနျးထုတျလုပျသူ Xiaomi ဟာ Mi8 စမတျဖုနျးနဲ့ အတူအားလုံးကို အံ့အားသငျ့စမေယျ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးကို မိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဖုနျးကတော့ Mi8 ရဲ့ တနျဖိုးနညျးမိုဒယျလို့ သတျမှတျနိုငျတဲ့ MI 8 SE ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျအဲ့ဒီဖုနျးဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 710 SoC ကိုပထမဆုံးသုံးထားတဲ့ စမတျဖုနျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးသုံးသပျသူ အမြားစုကတော့ MI 8 SE ကို FLAGSHIP KILLER ဖုနျးလို့သတျမှတျနကွေတယျ။ တကယျရော MI 8 SE ဟာ FLAGSHIP KILLER ဖုနျးတဈလုံးဖွဈရဲ့လားဆိုတာကို သူ့မှာပါဝငျတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ ….
MI 8 SE မှာတော့ Mi 8 ရဲ့ဈေးသကျသာတဲ့ စမတျဖုနျးဖွဈတာနဲ့အညီ သဈလှငျတောကျပနတေဲ့ Notch ပုံစံထိပျဘကျလေးနဲ့အတူ Full-View အတှေ့ အကွုံသဈကို ရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။ အရှဖေ့နျသားမကျြနှာပွငျကို ကာကှယျနိုငျစဖေို့အတှကျကတော့ စမတျဖုနျး၂မြိုးလုံးမှာ Corning Gorilla Glass ကိုသုံးထားပါတယျ။ ဒီဇိုငျးကတော့ ဒျေါလာ၃၀၀ ဝနျးကငျြဖုနျးတှထေဲမှာ အမိုကျစားပါ။
MI 8 SE မှာတော့ 5.88 လကျမနဲ့Super AMOLED ကိုသုံးထားပွီး 1080 x 2244 pixels( 18.7:9) နဲ့ဖွဈပွီး အရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျဟာ 81.3% အထိကိုကယျြပွနျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့မကျြနှာပွငျပိုငျးမှာတော့ HDR10 display နဲ့ DCI-P3 ကိုသုံးထားတာကွောငျ့ အရောငျဖျောပွမှုပိုငျးမှာ အတိကဆြုံးပွသပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
MI 8 SE ကတော့ Snapdragon 710 ကိုပထမဆုံးသုံးလာတဲ့ စမတျဖုနျးပါ။ Snapdragon 710 မှာတော့ Octa-core (8×2.2 GHz Kryo 360) ကိုသုံးထားတာဖွဈတယျ။ AI လုပျဆောငျခကျြပိုငျးမှတော့ Snapdragon 845 မှာပါတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှနေဲ့ တူညီမှာဖွဈပါတယျ။ RAM ပိုငျးမှာတော့ ရှေးခယျြခှငျ့တှရှေိနပွေီ6းGB RAM အလုံးကိုကိုငျတာ အကောငျးဆုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
Mi 8 SE မှာတော့ AI dual ကငျမရာနဲ့ဖွဈပွီး တဈခုမှာ 12-megapixel ဆငျဆာနဲ့ နောကျတဈခုကတော့ 5-megapixel ဆငျဆာနဲ့ဖွဈပါတယျ။ ကငျမရာရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှအေနနေဲ့ f/1.9 aperture, Bokeh mode, Portrait mode, monochrome temp flash, HDR adjustment, panorama mode, burst mode, facial recognition, dimming technology, EIS တို့ပါဝငျပါတယျ။ AI ကငျမရာရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေ business card recognition, intelligent translation နဲ့ intelligent exchange rate တို့ကို စှမျးဆောငျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
အရှဘေ့ကျ Selfie ကငျမရာကတော့ 20-megapixel ဖွဈပွီး AI background bokeh, smart beauty features အတှကျအရှဘေ့ကျမှာ soft light, automatic HDR, 4K video ရိုကျကူးနိုငျမှုနဲ့ slow motion တှရေရှိနိုငျစှမျးပါ။ လကျရှိမွငျတှရေတဲ့ ပုံစံကတော့ MI 8 SE မှာထညျ့သှငျးထားတဲ့ကငျမရာလုပျဆောငျခကျြက ပိုကောငျးနသေလို့ပါ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ သူ့မှာ AI ထောကျပံ့ခကျြကို အကောငျးဆုံးပံ့ပိုးနိုငျတဲ့ Snapdragon 710 နဲ့ Dual-pixel နညျးပညာပေါငျးစပျလိုကျရငျ အတျောကွီးကောငျးတဲ့ ပုံတှေ ထှကျရှိလာမှာပါ။
MI 8 SE မှာတော့ Android 8.1 Oreo နဲ့ MIUI 10 ကိုတပါတညျး သုံးနိုငျနပေါပွီ။ ဒါဟာလညျး အားသာခကျြတဈခုပါ။ ဘကျထရီကိုတော့ 3120 mAh နဲ့ Qualcomm Quick Charge 3.0 ပဲသုံးထားပါသေးတယျ။
ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုအပိုငျးမှာတော့ Mi 8 series ဖုနျးဖွဈနတောကွောငျ့ dual nano-SIM ထောကျပံ့ပေးထားပွီး ကတျ၂ခုလုံးဟာ VoLTE ကှနျရကျခြိတျဆကျမှု ရရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ frequency bands တှကေတော့:
FDD-LTE B1/3/5/7/8 တို့ဖွဈပွီး အခွားခြိတျဆကျမှုတှအေနနေဲ့ 802.11a/b/g/n/ac WiFi, WiFi Direct, 2×2 MIMO Technology, MU-MIMO, WiFi Display နဲ့ Bluetooth 5.0 တို့ကိုသုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Previous articleMacOS Mojave ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Apple
Next article၃၇ စက္ကန့်အတွင်း ပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့ Xiaomi Mi 8